Shirkii Tana Forum oo Bahir Dar, Itoobiya lagu soo geba-gebeeyey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Shirkii Tana Forum oo Bahir Dar, Itoobiya lagu soo geba-gebeeyey
April 19, 2015 - By: Abdirizak Shiino
Waxaa maanta (Axad) lagu soo gebagebeeyey magaalada Bahir Dar ee dalka Itroobiya shirkii afaraad ee Madasha Tana Forum. Waxaa khudbadio kala duwan ka jeediyery madax ka socota qaaradda Afrika, waxaana shirka looga hadlaayey Cilmaaniyadda, Dimoqraadiyadda, Afrikadaweyn iyo Siyaasadda, waxaan meesha ka marneyn arrimaha Amniga gaar ahaan xagjirnimada. Shirka ayaa furmey maalintii shalay ee Sabtida.
Shirka waxa ka soo qaybgalay Madaxweynayaasha dalalka Rwanda, Uganda, Kenya, Mali iyo Madaxweynayaal hore, sidoo kale waxaa ka mid ahaa madaxdii lagu casumey Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Cali Gaas. Wefdi ka socda Dowladda federaalka Soomaaliya oo uu hoggaaminaayo Raysalwasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa gelinkii danbe ee shalay shirka ku biiray.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo khudbad ka jeediyey madasha uu shirku ka socdo ayaa ku baaqay in muhiim tahay in layska kaashado dagaal ka dhan ah argagixisada iyo xagjirnimada si loo sugo amaanka qaaradda Africa. Waa markii labaad ee Madaxweynaha Puntland lagu casumo Madasha Tana Forum.
Waxyaabaha ka soo abxay Shirka sanadlaha ah ee Tana Forum ayaa dib loou darsaaa shirarka looga hadlaayo masiirka Qaarada Afrika.
Madasha Tana waxaa asaasey Raysalwasaarihii hore ee Itoobiya Malaz Zenawi, waxaana Guddoomiye u ah Madaxweynihii hore ee Neyjeeriya Olusegun Obasanjo.